သံသာမိုးသိမ့်ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်အသစ် – Alanzayar
အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံဖိုင် ဖော်ပြထားသည်။
သံသာမိုးသိမ့်ကတော့ တက်သစ်စ မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သံသာမိုးသိမ့်က “ကျွန်မက မဟေသီ” ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ နာမည်ကြီးလာသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။သံသာမိုးသိမ့်က လက်ရှိထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့ “အချစ်ဖွဲ့လေညင်း” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာလည်း မေပျိုဖြူအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ရင်း
ပရိသတ်အားပေးမှုကို ခံယူနေလျက်ရှိပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ အောင်မြင်မှုရရှိနေ တဲ့ သံသာမိုးသိမ့်ကသူမကို ချစ်ခင်အားပေးတဲ့ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က ပရိသတ်တွေက အခုလို တစ်ခဲနက် အားပေးမှုကတော့ သံသာရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြုအမူလေးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အခုမှာတော့ သံသာမိုးသိမ့် ကို ဘာကြောင့် Lucky Girl လို့ ခေါ်တာလဲ? ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။ အပြည့်အစုံကို အောက်တွင် ရုပ်သံဖိုင်ဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။crd
သံသာမိုးသိမျ့ကတော့ တကျသဈစ မငျးသမီးတဈယောကျဖွဈတဲ့ သံသာမိုးသိမျ့က “ကြှနျမက မဟသေီ” ဇာတျလမျးတှဲနဲ့ နာမညျကွီးလာသူတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။သံသာမိုးသိမျ့က လကျရှိထုတျလှငျ့ပွသနတေဲ့ “အခဈြဖှဲ့လညေငျး” ဇာတျလမျးတှဲမှာလညျး မပြေိုဖွူအဖွဈ သရုပျဆောငျရငျး
ပရိသတျအားပေးမှုကို ခံယူနလေကျြရှိပါတယျ။ တဈနိုငျငံလုံးအတိုငျးအတာနဲ့ အောငျမွငျမှုရရှိနေ တဲ့ သံသာမိုးသိမျ့ကသူမကို ခဈြခငျအားပေးတဲ့ အနယျနယျအရပျရပျက ပရိသတျတှကေ အခုလို တဈခဲနကျ အားပေးမှုကတော့ သံသာရဲ့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ အပွုအမူလေးကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။
အခုမှာတော့ သံသာမိုးသိမျ့ ကို ဘာကွောငျ့ Lucky Girl လို့ ချေါတာလဲ? ဆိုတဲ့ အကွောငျးကို ဖျောပွပေးသှားမှာပါ။ အပွညျ့အစုံကို အောကျတှငျ ရုပျသံဖိုငျဖွငျ့ ကွညျ့ရှုနိုငျပါတယျ။crd
Previous Article ငွေနှစ်ဆ ပွားစေသော ငွေပွား အစီအရင် (တစ်လမှာ နှစ်ကြိမ်သာ ပြုလုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်)
Next Article ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အကြီးဆုံးငလျင်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်….0